Xasan Sheekh “Xildhibaanada Jubbaland laga soo doortay waxaa weydiistay inay Kalsoonidooda i siiyaan | Baydhabo Online
Xasan Sheekh “Xildhibaanada Jubbaland laga soo doortay waxaa weydiistay inay Kalsoonidooda i siiyaan
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay deegaanada Jubbooyinka weydiistay kalsoonidooda, si mar kale afarta sano ee soo socota uu dalka u hoggaamiyo.
Xasan Sheekh oo la hadlayay warbaahinta, kaddib markii uu la kulmay Xildhibaanada labada Aqal ee laga soo doortay Jubbaland ayaa mar kale rajo ka muujiyay inuu xilka sii haayo.
“Waxaa ahay Musharax, xildhibaanada Baarlamaanka ee Jubbaland laga soo doortay waxaa weydiistay kalsoonidadooda, in mar kale ay dalka igu aaminaan oo aan afarta sano ee soo socota hoggaamiyo”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Xildhibaanada labada aqal uu la wadaagay ajandayaashiisa afarta sano iyo waxa uu ka qabanayo dalka, isagoo xusay in muhiimada ugu weyn ay tahay amniga.
“Amniga waaye waxa noogu muhiimsan iyo sareynta Sharciga, waxaa rabnaa in Amniga dalkaan hagaago oo baabuurka Kismaayo ka soo baxa uu Muqdisho tago asoo nabad ah”ayuu yiri Xasan Sheekh.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa markii la dooranayay sanadkii 2012 soo bandhigay lix tiir oo ahaa barnaamijkiisa siyaasada, waxaana muhiimad gaar ah uu siiyay Amniga, hase ahaatee waxaa dhaliil badan ka jiraa amniga dalka, iyadoo Al-Shabaab ay weeraro iyo qaraxyo ka geysato dalka.
Afartii sano ee uu Madaxweyne Xasan Sheekh xilka hayay, weerarada ugu badan ayaa ka dhacay dalka, gaar ahaan Muqdisho, waxaa la weeraray Hotelo, maqaayado, xarumaha dowladda sida Madaxtooyada, Baarlamaanka, Maxkamadda sare iyo xarumo kale oo wasaaradeed.